कोरोनाबाट बच्न तीन मिनेट अभियान ! - Hamrokhotang
Home खोटाङ समाचार कोरोनाबाट बच्न तीन मिनेट अभियान !
२०७७ भाद्र २६, शुक्रबार ०९:१४
कोरोना संक्रमणवाट बच्न उद्योग बाणिज्य संघ खोटाङले सचेतनामुलक अभियान शुरु गरेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी वढिरहेको बेला बाणिज्य संघले दिक्तेलबजारका हरेक घर तथा पसलमा पुगेर सचेतनामुलक कार्यक्रम शुरु गरेको हो ।
यस्तै, होटलमा ‘एक बेञ्च, एक टेवल’मा ग्राहकलाई खाने वस्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरिएको संघका अध्यक्ष राईले सुनाउनुभयो । अभियानका क्रममा बाणिज्य संघले सामान्य किसिमको मास्कलाई जोडीको १५ रुपैयाँमा बिक्रीका लागि सूचना टाँस गरिरहेको छ । संघले दिक्तेलबजारका बढि चहलपहल हुने क्षेत्रमा जिवाणुनाशक सोडियम हाईपोक्लोराइड स्प्रे सुरु गरिएको जनाएको छ ।।